Alfa Izere Site Tarkov mbanye anataghị ikike ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Alpha Izere Tarkov mbanye anataghị ikike
Enwere ike iji GamePron merie ya na Tarkov
Na-achọ ịnwale mmiri ntakịrị? Na-eche free! Zụta Ihe Ngwaahịa -bọchị 1!
Nweta oge karie ma chịkwaa asọmpi ahụ gbanahụ Tarkov - Purzụta Igodo Ngwaahịa 1-izu taa!
Otu izu ezughi, huh? Anyị na-enye ọbụna igodo dị ogologo ma ọ bụrụ na-amasị gị! Keyzụta igodo ọnụ ahịa ọnwa 1!
Nweta ohere anyị Alpha EFT mbanye anataghị ikike taa na ị ga-ahụ ihe kpatara ndị mmadụ ji na-asọ egwu banyere arụmọrụ ya. Used nwetụbeghị mgbe ị na-eji ngwá ọrụ ọzọ nke na-enye ike a, ma jisiri ike ịnọ na-adịghị achọpụta n'oge niile.
Izere na Tarkov Alfa mbanye anataghị ikike Ozi
Gba ọsọ site na ndị iro abụghị nhọrọ mgbe ị na-egwu egwu gbapụ na Tarkov, na onye ọ bụla kpọọla aha a tupu amaara ihe anyị na-ekwu. Imirikiti ndị na-agba ụta nke mbụ ga-enye gị ụfọdụ ụdị aka ikpere ma a bịa imehie, mana ihe niile ọ na-ewe bụ otu ihe na-ezighi ezi iji nwụọ ka ọ nwụrụ mgbe ị na-egwu Escape si Tarkov - ọ bụ ya kpatara anyị ji agbanahụ Tarkov Alpha Hack nwere ghọọ ewu ewu. Nke a aghụghọ bụ Ofụri Esịt kernel na-agụnye a GDI NchNhr, na-eme ya ihe kasị ezigbo EFT mbanye anataghị ikike wepụtara ka ụbọchị!
Enwere ọtụtụ ihe nlere anya na ebumnuche enyemaka iji tụlee, dịka EFT Aimbot na EFT Wallhack enweghị atụ. Pụrụ ọbụna chọta amasị nke enweghị ngwụcha ume na mwepụ n'ime anyị EFT mbanye anataghị ikike, na-eme ya niile na-na-otu ihe ngwọta ị na-na-achọ ihe niile a.
Ozi onye iro (onye ọkpụkpọ, bot, ebe dị anya)
Ihe ESP na nzacha ego
mmịpụta isi ESP
Aimbot nwere Mkpọchi-ons nwere ike
Chọsie ike ịhazi FOV
Oxygen Inf (ume adịghị)
Banyere gbanahụ Tarkov Alfa
Imeghe ụzọ mgbapụ si Tarkov na EFT eji Aghọ Aghụghọ Ule nyeere bụ ume nke ikuku ọhụrụ, ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa ịtụgharị uche ma ị ga-enwe ezigbo ụbọchị. Na anyị Eszọ Mgbapụ si Tarkov Alpha mbanye anataghị ikike, ọ dịghị a mkpụrụ obi na mbara ala a ga-dakọtara na nkà gị. Ọ bụghị ọtụtụ EFT Ndị aghụghọ ga-enye gị ohere iji EFT Wallhack dị ịtụnanya, gosipụtara EFT Aimbot n'ụzọ zuru ezu, na Infinite Stamina ll n'otu ebe. Ogo nke ngwá ọrụ anyị agaghị arụ ọrụ nke ọma, ma ọ bụrụ na ike gwụrụ gị ịhapụ ndị bots na ndị egwuregwu, anyị EFT Cheats nwere azịza ya; ọ bụ oge ka ị merie!
Kedu ihe kpatara iji gbanahụ Tarkov Alpha karịa ndị ọzọ nyere gị?
Jụ iji capezọ Mgbapụ si Tarkov mbanye anataghị ikike anyị mepụtara bụ a otutu ka iweta mma ka a egbefight, dị ka ị na-aghaghị-abịa gafee a hacker ma ọ bụ abụọ mgbe ị na-egwu egwu. Ọ bụghị naanị na ị ga - echegbu onwe gị banyere ndị na - agba ọsọ na ndị egwuregwu ndị ọzọ nwere ọkaibe, mana ị ga - ahụkwa na ị na - eji aghụghọ egwu Anyị EFT Ndị aghụghọ na-adịghị achọpụta na-agaghị etinye akaụntụ gị na ihe ize ndụ, ekwe ka ị na anataghị ikike na-enweghị ihe ọ bụla na ya pụta. Ọ dị mfe ịtọlite ​​otu aghụghọ a, yana iji ya - enweghị ezigbo ihe kpatara ị gaghị anwale ya!
Dị ka onye ọkpụkpọ nke ịgbapụ na Tarkov, ime mkpebi ziri ezi dị oke mkpa maka ihe ịga nke ọma gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ọsọ n'oge ma ọ bụ na ịchọrọ ịhụ ihe ọgbaghara na ntọala nwere ike ime maka egwuregwu gị, anyị na-enye menu egwuregwu egwuregwu kensinammuo na Gamepron. Ngwá ọrụ anyị niile (gụnyere EFT Hack) bịara na-arụ ọrụ nke ọma ma dị mfe iji rụọ ọrụ na egwuregwu, na-enye gị ohere ịmegharị ntọala ma gbanyụọ dịka ịchọrọ. Kwesighi imechi ngwa gị iji mee mgbanwe ọ bụla, ebe ị nwere ike ime ya mgbe ị na-egwu Cheghọ aghụghọ ule na mgbapụ Tarkov adịghị mfe.
Gini mere iji tufuo ego na EFT Hacks ndi ozo? Ikwenye na onye na-eweta ihe nke ga-ejide ọdịmma gị n'uche ma nweta ohere anyị Alfa EFT Hack taa! Onweghi onye ọzọ nwere ike ịnapụta ụdị ahụmịhe ahụ hacking.
Bụrụ onye isi mgbapụ si Tarkov site na iji GamePron ịga n'ihu!
Njikere Na-achị with our Escape si Tarkov Alfa mbanye anataghị ikike?